जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले जनकपुरका पत्रकार उमा सिंहको १२औँ स्मृति दिवस मनाएको छ ।
कार्यक्रममा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख लालकिशोर साहले जनकपुरधामले एक निडर पत्रकार गुमाएको बताउँदै उनका नाममा पत्रकारका लागि गत वर्ष घोषित रु. पाँच लाखको अक्षय कोष यस वर्षदेखि विधिवत् रुपमा सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सो अक्षय कोषबाट पत्रकारिता क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान दिने पत्रकारलाई पुरस्कृत गरिने छ ।
आमा सुशीलासँगै बस्दै आएकी सिंहको २०६५ सालमा आजकै दिन राति करीब ८ बजे जनकपुरको रजौलस्थित डेरामा ह त्या गरिएको थियो ।
२०६५ साल पुस २७ गते जनकपुरको थापाचोकमा बस्ने सिंहको विभत्स ह त्या भएको थियो। सिराहा जिल्ला महेशपुर निवासी उमा सिंह जनकपुरमा थापाचौक स्थित डेरा लिएर बसेकी थिइन्। जनकपुरको रेडियो टुडेमा काम गर्ने सिंहको ह त्या धेरैले जग्गा जमिन र सम्पत्तिको लागि भएको भने पनि प्रष्ट कारण अझसम्म पत्ता लागेको छैन।
यता उनको हत्यामा संलग्न मुख्य अभियुक्तको रुपमा धनुषा जिल्ला अदालतले स्वामीजी भनिने उमेश यादवलाई जन्मकैदको सजाय सुनाइसकेको छ भने हत्यामा संलग्न रहको आरोपमा सिहंकी आफ्नै भाउजू ललिता सिंह ३ वर्ष जेल सजाय काटेर रिहा भइसकेकी छिन्।
चिसोका कारण तराईको जनजीवन कष्टकर बन्दै
सिन्धुपाल्चोकमा देउवाको समर्थनमा उत्रिएको जनलहर (फोटोफिचर)
मन्त्री जुलीलाई धनुषामा १०१ किलोको माला लगाएर स्वागत !
पार्किङ्ग गरेको पिकअप जलेर नष्ट